शासकहरूलाई कर्मचारीले टेरेनन् रे !
वैध आयले नेताहरूलाई अहिलेजस्तो विलासी जीवनयापन गर्न पक्कै पुग्दैन
२०७५ कार्तिक २० मंगलबार १३:२०:००
हिजोआज शासकहरूले कर्मचारीले नटेरेका कारण विकास र समृद्धिको मूल फुटाउन नसकेको धम्की मिश्रित गुनासो बढी नै सुनिन थालेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिकरूपमै केही साता पहिले कर्मचारीलगायत राज्यका अंगहरूले नटेरेको गुनासो गरेका थिए । नेकपा (नेकपा)कै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमवार विराटनगरमा ‘पुराना व्यवस्थाका कर्मचारीले परिवर्तन आत्मसात् नगरेको‘ भन्दै अप्रत्यक्षरूपमा ‘प्रतिक्रियावादी’ भएको आरोप लगाएका छन् । हुन पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र काम गर्नुपर्दा ‘गाले गोरु’ जस्तै अररो हुन्छ भने खानमा मौका पर्नेबित्तिकै बुझो हालिहाल्ने ‘चोर गोरु’जस्तै चण्डाल छ । यसैले नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई कजाउन सजिलो छैन । तर, कर्मचारीलाई प्रतिक्रियावादी कित्तामा राख्ने शासकहरूले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मसात् गरेको भने देखिएको छैन ।
अहिलेको सरकार पनि विगत केही दशकका सरकारहरूभन्दा खासै फरक देखिएको छैन । शासकहरूको दम्भ र अहंकार अझै बढेको छ । नागरिकलाई ‘घुँडा टेकाउने’ व्यवहारले सामन्ती संस्कारकै निरन्तरताको झल्को दिन्छ । अझ अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जसरी त श्री ३ महाराजाबाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्रीले दसैंमा टीका ‘बक्सने’ सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिएनन् । पार्टीको चियापानमा जाँदा रक्षामन्त्री सेनाको हेलिकोप्टर लिएर जान्छन् । नेकपा (नेकपा) अर्का नेता राज्यको कोषबाट लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर निजगढमा वन भए नभएको हवाई निरीक्षण गर्छन् । सवारी चालकको नामसमेत किर्ते गरेर राज्य कोषको पैसा खाने मन्त्री र सांसदलाई कर्मचारीले के टेर्थे त ? नेकपा (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जस्तो जीवन शैली पनि सायद श्री ३ हरूबाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्रीको थिएन । कर्मचारीले पनि त यी सबै देखेकै छन् ।
कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउने राजनीतिक नेताले एकपटक आत्म निरीक्षण गरे हुने हो । पुरानो व्यवस्थाका र अहिलेका शासकहरूको विचार र व्यवहारमा कति फरक छ ? के अहिलेका नेताको जीवन शैली हेर्दा यिनलाई प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक भन्न मिल्ने कुनै आधार छ ? कर्मचारीलाई कजाउन कि त तर्साउनु पर्यो । नभए उनीहरूलाई आदर्श र नैतिकताबाट जित्न सक्नुपर्यो । कर्मचारी रोबोट त हैनन् । चाटुकार भारदारबाहेक सामान्य जनताले अहिलेका कुन शासकबाट के प्रेरणा लिने ? के नेकपा (नेकपा) का अध्यक्ष दाहाललगायतका राजनीतिक नेताले आफ्नो आयव्यय पारदर्शी गर्न सक्छन् ? वैध आयले सत्ता वा प्रतिपक्षका कुनै पनि राजनीतिक नेताको जस्तो विलासी जीवनयापन गर्न पुग्छ ?
अध्यक्ष दाहालको गाडीको लस्करभन्दा अगाडि मोटर साइकल चलाएकै कारण विराटनगरमा अस्पतालमा बिरामीलाई खाना लिएर गएका व्यक्तिलाई प्रहरीले जरिवाना गरेछ । यस्तो सुन्दा वा देख्दा सामान्य व्यक्तिका मनमा श्रद्धा उत्पन्न होला कि आक्रोश ? अहिलेको अवस्था हेर्दा त राजनीतिक नेतृत्वले देश लुट्ने ‘लाइसेन्स’ पाएको ठानेजस्तो देखिएको छ । सायद, यिनै र यस्तै कारणले कर्मचारीले नेताहरूलाई नटेरेका हुन् । यसैले पहिले नेताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको परिवर्तनअनुरूप आफ्नो आचार र विचार सच्याऊन् । देश लुट्ने सोच र शैली त्यागून् । त्यसपछि कर्मचारीले परिवर्तनलाई खुला हृदयले नै आत्मसात् गर्नेछन् । थोरैले गरेनन् भने तिनलाई बिदा दिए पनि जनताले स्याबासी नै दिनेछन् । शासकहरूले आफूलाई सुधारे भने कर्मचारीलाई ‘परिवर्तन आत्मसात् गर्न सिकाउन’ पर्नेछैन ।